PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-07 - URamaphosa unxuse kuthuthuswe i-Afrika
URamaphosa unxuse kuthuthuswe i-Afrika
IPHINI likaMengameli waseNingizimu Afrika uMnuz Cyril Ramaphosa ligqugquzele abaholi baseAfrika nosomabhizinisi ukuthi babuyele emazweni abo benze konke abakuthembise kwiWorld Economic Forum (WEF) ngoba akufanele kukhulunywe ngezinkinga ezifanayo nasengqungqutheleni yangonyaka ozayo.
URamaphosa ubekhuluma emcimbini wokuvala iWEF eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, ngoLwesihlanu. “Ngonyaka ozayo kwiWEF kufanele sitshele abantu ukuthi yikuphi esikwenzile ukuthuthukisa impilo yabo, hhayi ukuthi silokhu sikhuluma ngokuthi intsha iswele amathuba omsebenzi. Sidinga ukubuyela kubantu bethu sibanike abakudingayo hhayi ukufeza izinhloso zethu ngoba ekugcineni sizofa sishiye intsha nezwe elingumlotha.”
Uthe uhulumeni kufanele atshale imali eningi kwezemfundo, ezempilo nasezinhlelweni zokuhlomisa umphakathi ngamakhono. “Kufanele siqinisekise ukuthi omame babelethela ezindaweni eziphephile, sitshale imali ezinhlelweni zokufundisa odado, siphinde siqinisekise nokuthi imfundo yasenyuvesi ayimbi eqolo. Imfundo kufanele ibe yisikhali sokukhipha abantu enhluphekweni hhayi ukuthi kube yiyona ebacindezelayo ngokuthi kube yidlanzana kuphela elikwazi ukukhokha imali yokufunda enyuvesi.”
Uqhube wathi iba buhlungu inhliziyo yakhe uma ezwa izibalo eziphezulu zentsha yase-Afrika engasebenzi futhi lokho kufanele kubaqwashise bonke njengabaholi. “Kufanele siqinisekise ukuthi imfundo yethu ihlomisa intsha ngamakhono ewadingayo ikakhulukazi amantombazane nabesifazane. Akufanele sifike ngonyaka ozayo sithi ucwaningo luthi amantombazane nabesifazane abafinyeleli kahle kwezemfundo, kodwa kufanele sifike sesisho ukuthi sakhe izikole ezingaki, bangaki abantu abathole amathuba omsebenzi amasha nokuthi umnotho wethu ukhula kangakanani.” Uthe bonke abaholi base-Afrika kufanele bayeke ukubhala ephepheni izinhlelo zabo, kodwa benze umsebenzi odingeka kubo. Uthe abampofu nabasuswe wudlame emakhaya abo, kufanele bathole imfundo yamahhala lapho bekhona.
Ebuzwa ngezinhlelo zakhe zokuphatha izwe, uthe abantu kufanele balinde ingqungquthela ye-ANC ezoba ngoDisemba ngoba akukho azokusho ngalolu daba.